अर्थ « Phidim Today
१८ जेठ,- आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ को नारालाई निरन्तरता दिने भएको छ । कम्युनिष्ट सरकार मनमोहन अधिकारीको सरकारले ल्याएको यस योजनालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको
वर्षभरि गाली खाएका अर्थमन्त्रीलाई यसपटक शेयरबजारकाे ताली !
१६ जेठ,- बिहीबार शेयर बजारको सूचक र कारोबार दुवै उकालो लागेका छन् ।बुधबार जेठ १५ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा शेयर काराेबारमा लाग्ने लाभकर ७ दशमलव
बजेट भाषण : कुन सडकलाई कति बजेट ?
१६ जेठ ,- सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको बनाउन काम सुरु गर्ने भएको छ । बुधबार संसद्‌मा आव २०७६/०७७ को बजेट भाषण सुनाउँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पूर्व-पश्चिम
बजेटले के केको भाउ बढायो ? (विवरणसहित)
१६ जेठ ,- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेसँगै केहि वस्तु र सामानको मूल्य बढ्ने भएको छ । बजेटमा कर बढाइएसँगै ती बस्तुको मूल्य बढ्ने भएको हो
१५ जेठ,- अर्थमन्त्रीले बजेट पढ्दा लाखौ रकम लिने गरेको हल्ला पहिलेदेखि नै चल्ने गरेको छ । तर वास्तविकता के हो भनेर रातोपाटीले बुझ्न खोजेको छ । लाखौ रुपैयाँ लिने हल्लाका
१३ जेठ ,- आगामी आर्थिक बर्षको बजेट आउँन अब २ दिनमात्र बाँकी छ । सरकार बजेट लेखनीमा जुटिरहदा आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट माग्ने सांसदको चाप बढेको छ । विगतमा सांसदलाई
११ जेठ ,-नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अढाई वर्षमा नै ११ लाखभन्दा बढी मिटर वितरण गरेको छ । प्राधिरकणले पछिल्लो समयमा आक्रामक रुपमा ग्राहकको संख्या बढाइरहेको छ ।३ वर्षअघिसम्म प्राधिरकणले वर्षमा मुस्किलले
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलकाे मूल्य बढ्याे
२० बैशाख,- नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यवृद्धि गरेको छ । हवाई ईन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको हकमा खुद्रा विक्री मूल्य यथावत राखिएको निगमले जनाएको छ ।
यतीले ल्यायो एटिआर जहाज
१५ बैशाख – निजी क्षेत्रको अग्रणी वायु सेवा प्रदायक कम्पनी यती एयरलाइन्सले आफ्नो सेवा विस्तारका क्रममा चौँथो ‘एटीआर–७२–५००’ जहाज भित्र्याएको छ । नाइन् एन एएनसी जहाज थाइल्याण्डको राजधानी बैंककबाट उडेर शुक्रबार
चौरीको संरक्षण, पर्यटनको विकासको प्रतिवद्धता सहित पाँचथरको उत्तरी फालेलुङ गाँउपालिकाको चाररातेमा तेश्रो चारी महोत्सव सम्पन्न भएको छ । समुद्र सतहदेखि ३ हजार ३ सय ४० मीटरको उचाईको चाररातेमा चौरी महोत्सव